परिवार होटलहरू छेउमा
मौसम टर्कीमा छुट्टीहरूको लागि छुट्टीहरू - मौसम
सुविधाहरूको सुविधाहरू: टर्कीमा जानको लागि कहिले राम्रो हुन्छ?
टर्कीको लागि टर्कीका लागि मूल्यहरू -
ताराका साथ टर्कीमा उत्तम परिवार होटलहरू: रेटिंग
आफैंको शहरबाट आक्रित डाबोबनका एक जना शहरहरू मध्ये एक हो, त्यहाँ खुला हावा संग्रहालय छ - मन्दिरको भग्नावशेष र पुरातन अवस्थाको ट्रेडिंग क्षेत्र। थप रूपमा, छेउको क्षेत्रहरूमा, असंख्य गाउँहरूले पूर्वाधारहरू, मार्केट, स्मारिका पसलहरू, र होटेलबाट बाहिर आउँदछन्।
बच्चाहरूसँग मनोरञ्जनका लागि सब भन्दा लोकप्रिय बेहरू ठूला होटल अक्सरका साथ क्लाक्लला हो, क्लब होटेलको लागि दलब हो।
बच्चाहरूको समीक्षाको पक्षमा सब भन्दा बढी - पछि, यहाँ बस्नेको मूल्यहरू छिमेकी प्रोटीन, र होटेलमा बाहिरी गतिविधिहरूमा कम हुन्छन् कुनै खराब छैन। छेउमा होटल को छनौट बच्चाहरु संग परिवारहरु को लागी उत्कृष्ट रहनको ग्यारेन्टी हो।
हामीले व्यक्तिगत रूपमा यी सेवाहरू प्रयोग गर्दछौं। अब तिनीहरू टर्कीमा मात्र खुला होटलहरू प्रदर्शन गर्छन्, पर्यटकहरू (बिग प्लस!), र सबै मूल्यहरू प्रत्यक्ष भ्रमण सञ्चालकहरू हुन्।
हामी भर्खर तपाईंको ताजा लेखबाट फर्कियौं - हालको टर्कीको बारेमा नयाँ जानकारीको साथ। म यो पढेर परिचित हुन प्रस्ताव गर्दछु:
टर्की सम्पूर्ण चार समुद्रले धोइन्छ, तर हामी मौसम "मासनमा पर्यटन" मा रुचि राख्छौं - भूमध्यसागर र Aigan।
भूमध्य तट सुख्खा तातो गर्मी र एक स्लर्च नरम जाडो हो। अधिकतम फ्रस्टहरू फेब्रुअरीको अवधिमा दगुर्छन्, र तापमान + 1 15 डिग्री सेल्सियस नजिक छ।
गर्मी "टर्कीशिप" मे, र उच्च डिग्रीको मौसम सेप्टेम्बर सेप्टेम्बरसम्म फैलिएको छ। यस समयमा हावाको तापमान + 35 डिग्री सेल्सियस भित्र राखिन्छ! र अगस्टमा सबैभन्दा चुचुरोमा पानी +0 डिग्री सेल्सियस मा टर्कीमा पारिवारिक बिदाका लागि, जब बेक यति महत्त्वपूर्ण छैन, जून छनौट गर्नु राम्रो हुन्छ।
AEGEN कोस्टको रिसोर्टहरूलाई थाहा पाउँदा जुलाईको नजिक आउँछ (+2 डिग्री सेल्सियस सम्म) र सेप्टेम्बर सम्म खडा हुन्छ। तर: कम आर्द्र, र त्यसैले तातो सजिलो छ। समुद्र पछि न्यानो हुन्छ (जुलाईमा) र चिसो हुन्छ (सेप्टेम्बरमा); औसत, तापमान +226 डिग्री सेल्सियस मा
वसन्त टर्कीमा Zybabo र वर्षाको वर्षा। पहिलो समुद्री किनार "आगन्तुकहरू" मात्र, र नुहाउने मौसम भने, मुख्यतया भूमध्यसागर तटमा खुल्छ।
शरदर - सेप्टेम्बर-मध्य अक्टुबर - तपाईं मखमल मौसम भन्न सक्नुहुन्छ। सूर्यले थोरै, थोरै कम पर्यटकहरूलाई चोट पुर्यायो, र भ्रमण यति कठिन छैन। नजिकको छ, जसको मतलब सूर्यमा पर्दाको पर्दा।
<< p> एक बच्चाको साथ टर्की जानु राम्रो हुन्छ? यहाँबाट छनौट गर्न। भूमध्यसागरमा - या त मे-जून, वा सेप्टेम्बर-अक्टुबर। एजियन सागरलाई जुलाई र अगस्तमा आक्रामक सूर्यबाट बचाउन सकिन्छ। यी अवधिहरूको फाइदा: तातो, बालुवा र ढु bl ्गा उमाल्ने छैन, समुद्र न्यानो र पर्यटकहरू अझै थोरै छन्। परिवारको उच्च मौसममा, तिनीहरू पनि जान्छन्, तर स्ट्रिंगेर र छतमा खलागी र मूल्यहरू बच्चाहरूको शरीर र अभिभावक जेबको लागि सुगन्धित खुशी हुन्छन्।
र यदि बजेट सीमित छ भने? बचत गर्नुहोस् (गहन छ) हुन सक्छ ..., नयाँ वर्षको बिदा पछि ठीक छ। यस अवधिमा सस्तो एयर यात्रा, र छुट्टीमा चेक।
आराम गर्ने ठाउँ छनौट गर्दा र बच्चाहरूसँग जानको लागि र कहाँ जाने भनेर नेभिगेट गर्ने के नेभिगेट गर्ने? यो तल छ। यसै बीचमा, यो भन्नुहोस् कि यो कहाँ पुग्ने लाभदायक छ:
<< p> राम्रो हरियो होटल दुई बेन्काहरू - एक स्यान्डी, बच्चाहरूको लागि पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ र प्रेमीहरूको लागि क्वियरहरूको लागि पूर्ण रूपमा। खाना र कोटी नम्बरहरू मिलान, राम्रो एनिमेसन कार्यक्रम।
<< p> पाहुनाहरू Lonieara विश्वमा * * ले Lonicera रिसोर्ट र स्पा * * को क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्दछ। अलानिमा मनपर्ने परिवार बजेट, एक उत्कृष्ट बलौटे समुद्री तट, राम्रो एनिमेसन, खाना वयस्कहरुका लागि र 10 बच्चाहरूको लागि खाद्य पदार्थ स्लाइडहरू।
पूर्ण परिवारको साथ सुन्दर क्षेत्र, बलौटे समुद्री तट, बालुवा समुद्री तट, केटाकेटी र वयस्कहरूको लागि राम्रो एनिमेसन र प्रशस्त मनोरन्जनका लागि प्रशस्त मनोरन्जन र प्रशस्त मनोरन्जन र प्रशस्त मनोरन्जन। इन्डिनिनिया क्लब अलानाको पाहुनाहरूले इन्डिनिनियन डिलक्स * * पोखरीहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्।
अर्को मनपर्ने, पेगस रिसोर्ट * * र पेगसज शाही * *, उत्कृष्ट बलौटे समुद्र तट सहितको साधारण क्षेत्र छ। होटेलको बच्चाहरूको क्लब टीयू ट्यूकन छ - प्रत्येक युगको लागि एक कार्यक्रम छ।
अर्थव्यवस्थाको एक सानो होटेल, अन्तिम नवीकरण 201 2018 मा थियो, समुद्री किनार भूमिगत संक्रमण, राम्रो खाना, मूल्य-गुणवत्ता हुँदै थियो।
<< p> होटल पाहुनाहरूले आंशिक रूपमा मिरामियर बिच * * को क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्दछ: पानी स्लाइड, जिम, डिस्को। राम्रो एनिमेसन, खाना, बलौटे समुद्र तट।
साइजको बीचमा अवस्थित छ, बीउ आरामको लागि उत्कृष्ट बजेट होटल, एक राम्रो स्यान्डाझ, खाना, एनिमेसन।
<< P> टर्की रिसोर्टको यात्राको बारेमा कुरा गर्दा परिवारसँगै अर्को विचारको बारेमा उठ्दछ, त्यसको दौरान जुन तपाईं घनिष्ठ मानिस नजिकै रहन सक्नुहुन्छ र दैनिक समस्याहरूको बारेमा सोच्नुहोस्। टर्कीमा सब भन्दा राम्रो परिवार होटलहरू फेला पार्न को लागी, धेरै जसो रूसीहरू केहि कठिनाइहरूको सामना गर्छन्, अर्थात्:
<< p> होटल जटिलताको विविधताले तपाईंलाई पर्याप्त चाँडै आवश्यक पर्ने फेला पार्न अनुमति दिन्छ। सही, उपयुक्त विकल्पहरू आवश्यक भन्दा धेरै हुन सक्छ। रोक्नको लागि, वर्षौंको यात्रा र समयको अवधिमा असर पार्नेछ, होटलको संख्या र परिवारका वित्तीय अवसरहरू र परिवारका वित्तीय अवसरहरूका लागि आवश्यकताहरू पनि प्रभाव पार्दछ।
हामीले एक पारिवारिक छुट्टीको लागि टर्कीमा उत्तम होटेलहरूको सूची तयार गरेका छौं ताकि तपाईं सजिलैसँग अन्तिम विकल्प बनाउन सक्नुहुन्छ। तर पहिलेका तीन टिप्सहरू जसले गल्ती गर्न आवश्यक पर्ने केही टिप्स:
अत्यन्त राम्रो समीक्षाले त्यस्ता पारिवारिक स्वामित्वको होटल As5 *, * * * * गर्व गर्न सक्छ। एक वैकल्पिक रूपमा, उदाहरण को लागी, यदि सबै कोठा माथि सूचीबद्ध होटल कब्जा गरिएको छ, प्रस्ताव * * * * * * * * *।
यदि तपाईं सस्तो परिवार होटलहरूलाई राम्रो समुद्री तटमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने, हामी4स्टार होटेलको विवरण अध्ययन गर्न सिफारिस गर्दछौं। प्रस्तावित मनोरन्जनको स्पेक्ट्रम केही सानो छ, तर मूल्य 10-20 प्रतिशत तल्लो कम हुन्छ। प्रमाणित विकल्प -4 * र * * बाट।